Iindaba-Olunye uluvo oluqhelekileyo malunga neelinen ze-yoga mat
Ilinen yoga mat yimethi ye-yoga enemigca. Ihlaziywa ngokusekwe kumgangatho weyoga yemveli. Isebenzisa inkqubo ye-orthographic yoga ukuprinta umlawuli kwingqondo yomhlohli weyoga kumphezulu womgangatho ukunceda iingcali zenze ii-asanas ezichanekileyo zeyoga. Kukwaluncedo kumqeqeshi ukuba akhokele ngcono ii-asanas ezingalunganga zeengcali. Ayisiyiyo yonke imisebenzi yemethi yemveli yeyoga, kodwa ikwanomsebenzi wokunceda isikhokelo.
Ukusetyenziswa kweelinen mat mat
Inyathelo 1: fumana umgca osembindini womnqamlezo
Sithatha ilaphu yelog yelineni ebekwe emhlabeni njengomgangatho kunye nokuma embindini wemethi. Kwimethi, kukho umgca weziko elime nkqo kwimethi yeyoga. Xa siziqhelanisa nezikhundla zeyoga emethini, kufuneka siqale sisebenzise eli ziko linqamlezayo njengomgangatho.
Inyathelo 2: Ukuthelekisa ngokuthe ngqo
Imethi ibekwe phantsi emhlabeni, kwaye imigca engaphambili icace gca phambi kwamehlo akho. Yintoni i-asana ofuna ukuyenza kuqala kukufumana uphawu lwangaphambili kumphezulu womgangatho, emva koko ubeke ngokukhawuleza nangokuchanekileyo kwindawo ehambelana nayo, emva koko wenze uhlengahlengiso oluhle ngokwendlela yokuphefumla komzimba. Ngaba ayimangalisi into yokuba umqeqeshi angayigqiba ngokuchanekileyo i-yoga asana ngokwakhe!
Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, Ingxowa yeYoga yokuHamba, I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, Ingxowa yeYoga yeSling, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba, iphazili yomthambo,